“Grande São Paulo” : herintaona mialoha ny fifidianana ny ho ben’ny tanàna, misy asa fanorenana miisa 500 tsy vita ara-potoana , na naato · Global Voices teny Malagasy
“Grande São Paulo” : herintaona mialoha ny fifidianana ny ho ben'ny tanàna, misy asa fanorenana miisa 500 tsy vita ara-potoana , na naato
Efa 10 lavitrisa lR$ no lanin'ny governemanta tamin'ireny tetikasa ireny
Voadika ny 10 Novambra 2019 13:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Português
Tamin'ny 2014 no tokony novitaina ny “cité Pequiá”, saingy natsahatra ny asa; taorian'ny fialàn'ny mpiasa tao dia nipetrahan'ny olona ny toerana. Sary : Ana Beatriz Felicio/Agência Mural, nahazoana alàlana taminy.
Tafiditra ao anatin'ny fiarahana miasa misy eo amin'ny Global Voices sy Agência Mural no namoahana ity lahatsoratr'i Paulo Talarico, Ana Beatriz Felicio, Henrique Cardoso, Kátia Flora, Micaela Santos ary i Thalita Monte Santo ity, ary i Magno Borges no teo amin'ny lafiny ‘infographie’.
Tao an-dakozian'ny iray tamin'ireny trano fonenana ireny, i Kelly Archanjo Costa dos Santos, 43 taona, mpitsimpona fako mbola azo ahodina ho ampiasaina indray, no mampinono ilay vavikely zandriny indrindra amin'ireo efatra naterany izay izy irery ihany no nampiteraka ny tenany tao an'efitranony. “Ity izao, tena ara-bakiteny mihitsy ny hoe teto [amin'ny cité] Pequiá izy no teraka”, hoy izy.
Afa-tsy ireo rindrina be vita simenitra sy ireo tariby matevina mihanjahanja mitondra herinaratra, dia mety hitovy amin'ny trano hafa rehetra ihany ilay trano, miaraka amin'ireo fitaovana fampiasa an-tokantrano ananany sy ny haingo tsara voatra nataony. Saingy, tsy inona akory io fa ilay asa fanorenana natsahatra tao Carapicuíba, tafiditra amin'ilay Grande São Paulo.
Kelly no iray amin'ireo fito mpitarika ny fibodoana toerana ao Pequiá. Nomanina ho an'ny taona 2014, tokony ho toeramponenana ahitàna trano 196, nampiasàna vola maherin'ny 14,7 tapitrisa euros.
Ilay toerana no endrika maneho ny toedraharaha izay mahakasika ilay faritra midadasika be mponina indrindra ao Brezila [fr], misy mponina miisa 21 tapitrisa sy kaominina 39.
Ny tahirin-kevitry ny TCE (Fitsaràna misahana ny fitantanambolam-panjakana), nangonin'ny Agência Mural, dia mampiseho fa ao amin'ny tanàna mihizin'i São Paulo fotsiny, tetikasa 139 no efa nihoatra ny fetrandro tokony hanaovana azy ary 137 hafa no tsy nanomboka mihitsy na nialàna an-daharana.
Na natsahatra aza ny asa, volam-bahoaka no nolaniana tao. Raha kely indrindra, 1,2 lavitrisa euros no natokana no an'ireny tetikasa tsy tontosa ireny. Raha tontosa daholo izy rehetra, mety nahavita fampiasambola manodidina ny 10 lavitrisa euros ilay faritra an-tanandehibe, sandan'ireo fifanarahana rehetra vita sonia raha toa ka vita ara-potoana izy ireny.
Fa tsy izay ihany. Tsy noraisin'ny TCE tanaty kajikajiny ireo asa nosahanin'ny kaominina ao São Paulo, izay ny TCM (Fitsaràna misahana ny fitantanambolan'ny kaominina). Ny fitsirihan'ny TCM navoaka tamin'ny May lasa teo dia namoaka fa nisy asa goavana 289 tsy tontosa hatramin'ny farany tao an-drenivohitra, ary 17 monja no nahavita nanaja ny fepotoana, 106 no natsahatra tanteraka.
Manampy azy ireny ireo tranga izay ny TCU (Fitsaràna misahana ny fitantanambolan'ny Firaisambe) irery ihany no manaraka azy akaiky, noho izy ireny andraikitry ny governemanta federaly, toy ireo oniversite federaly. 15 eo raha kely indrindra no voaisa tamin'ireo tetikasa toy izany.
Mampanahy ny ao amin'ny faritra ilay endri-javatra, herintaona monja aty alohan'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna, satria ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina monisipaly dia hofidiana hiasa eo anelanelan'ny 2021 sy 2024. Raha atambatra amin'ireo ny tarehimarika avy amin'ny Fitsaràna misahana ny fitantanambolam-panjakana sy ny misahana ny an'ny kaominina, asa fanorenana goavana miisa 500 mahery no hita ho natsahatra, na taraiky.
Nahazo zazavavy tao amin'ny “cité” i Kelly . Sary: Ana Beatriz Felicio/Agência Mural, nahazoana alàlana.
Ilay tranobe ipetrahan'i Kelly dia vokatry ny fiarahana miombonantoka teo amin'ny CDHU (Orinasa fampiroboroboana ny toeramponenana an-tanandehibe) sy ny governemanta federaly, izay nitarazoka efa ho folo taona mahery. Nihitsoka an-taona maro ireo asa nampanantenaina fa ho vita tamin'ny 2004, ary tsy nanomboka raha tsy tamin'ny 2012. Najoro ireo tranobe, fa vetivety avy eo dia navela tamin'izay endriny vita teo. Taorian'io fampiatoana io, tamin'ny 2015, nisy nipetraka ireo trano fito mijoalajoala izay naorina saingy tsy novitaina hatramin'ny farany.
Tonga honina tao i Kelly satria tsy an'asa izy tamin'izany fotoana izany ka tsy nanana vola hanofàna trano. “Betsaka amin'ireo tonga eto no noho ny antony hofantrano, na tsy fananana asa, na hiaraka hipetraka amin'ny ray aman-dreniny. Araka izany, nitolona izahay mba hahaleo tena, mba hanana toerana iray hivelomana. Ny mafy indrindra ho ahy amin'izao fotoana izao dia ny hahitàna asa mifanaraka amin'ny taonako”, hoy izy mitantara. 43 taona izy izao. Nametraka fitarainana eny amin'ny fitsaràna anefa ny mpitantana ny tanàna mba hakàna ireo toeramponenana ireo.
Tratr'io endri-javatra io ihany koa ny toerana maro hafa ao Grande São Paulo. Ny fampianarana no sehatra tena ahitàna betsaka indrindra ireo asa tsy mandeha : 58 no taraiky na naato. Ireo garabola no tena iharan'izany, izay mampisavoritaka ny fiainan'ireo ray aman-dreny mila mandeha miasa nefa tsy manana olona azo ametrahana ny ankizy.
Izany no manjo an'i Leo Domingos sy Carina Marina Dias Sotero, 36 sy 32 taona, ray aman-drenin'ilay zazavavikely Mallu, sivy volana. Tsy an'asa izao ilay reny, saingy mikaroka fatratra mba hahita asa. Isanandro, lalovan'i Leo ny eo amin'ny sahanasa iray ao Parque Cecap, any Guarulhos, toerana nambara fa hanorenana CEU (Foibe Fampianarana) iray sy kilasy garabola.
“Tena mampalahelo ahy ny mahita fotodrafitrasa manana habe tahaka izao nefa mihasimba sy kikisan'ny fotoana eo fotsiny”, hoy Leo mitantara, izy izay manaraka ny firoson'ilay tetkiasa hatrany am-piandohany. Kilasy garabola roa no nialàna an-daharana ary natsipin'ny mpitantana ny tanàna ho an'ny amin'ireo teo alohany ny hadisoana.
Ao amin'ny vakimparitra avaratra ao Osasco no mipetraka i Edivaldo, amin'ny toerana izay nijanona fotsiny ho fampanantenana ny fametrahana ireo tatatra fanariana rano. Sary: Paulo Talarico/Agência Mural, nahazoana alàlana.
Ao Osasco, tanàna misy mponina 700 000, ny tondradrano ateraky ny ranon'orana no miteraka ny iray amin'ireo olana atrehana. Tetikasa iray maherin'ny 22,5 tapitrisa euros no nampanantena hamaha io toedraharaha io, saingy nidona tamin'ny nambara ho olan'ny famatsiambola sy ny fanomezana ny tsena tsy nanaraka fepetra ny fanatontosàna azy.
Toy izay koa no misy ao São Bernardo do Campo sy Diadema, tanàna zarain'ny lakandranon'i Ribeirão dos Couros ho roa ka mampanano-sarotra ny fiainan'ireo monina eny imorony rehefa fotoam-pahavaratra sy tondradrano. Naverin'ny mpitantana ny tanàna nalefa ny tolobidy mba hamitàna ilay tetikasa. Ao Franco da Rocha, 22 ireo asa fanorenana taraiky, mahakasika ny sehatry ny fahasalamana sy fampianarana ny ankamaroan'ireo.
Ny mahakasika ny sehatry ny lalamby no iray amin'ireo tetikasa isan'ny goavana indrindra tsy mbola misy afa-tsy any anaty antontan-taratasy.
Ireo izay monina any amin'ireo faritra ivelan'ny renivohitra, toa an'i Brasilândia, any avaratra, sy Paraisópolis [fr], any atsimo, dia efa an-taona maro no miandry ny fahatongavan'ilay fiarandalamby ambanin'ny tany lazaina fa hanamaivana ny fivezivezena ao amin'ireo vohitra ireo, misy mponina maherin'ny 300 000.
Ao Paraisópolis, efa tamin'ny 2014 fotoana niadiana izay ho tompondaka baolina kitra erantany natao tao Brezila no nisy ny fampanantenana. Ny toerampilalaovana Morumbi no nofidiana handray ny Fiadiana ny ho tompondaka erantany, ary napetraka ilay tetikasa lalamby tokana (monorail), izay tokony hamakivaky ilay faritra. Tokony hampitohy ny seranampiaramanidina sy ny toby São Paulo-Morumbi amin'izao fotoana izao izy io.
Ao akaikin'ny favela Paraisópolis, toerana tokony nahatongavan'ilay fiarandalamby tamin'ny 2014. Sary : Henrique Cardoso/Agência Mural, nahazoana alàlana
Toby fiantsonana roa no tokony hiasa ao amin'ilay faritra izay ‘favela‘ (toeramponenana tsizarizary) lehibe indrindra ao São Paulo. “Dia natao ny Fiadiana izay ho Tompondaka [tao Brezila], avy eo ny Fiadiana izay ho Tompondaka manaraka azy, fa tsy mbola tontosa ihany ireo asa” hoy ny fanehoankevitr'i Gilson Rodrigues, filohan'ny fikambanan'ireo mponina.
“Betsaka izahay no nihetsika mba hahatontosa ilay tetikasa. Ny olana fototra ho an'ity tanàna ity dia ny fahafahana mivezivezy”.
Nanaraka ny fandrosoan'ny tetikasa ireo mponina. Hatreto, tsy mitondra afa-tsy hatreo amin'ny fiantsonana faha-9 ny zotra faha-17, izany hoe alohan'ny hiampitàna ny rio Pinheiros.
Na izany aza, mbola antenain'ilay vondrompiarahamonina ny hahita ny fahavitan'ireo asa, satria efa novidian'ilay orinasan-dalamby ambanin'ny tany ireo tany hanaovana azy, ary dia tsy maintsy ho ampiasaina ho an'izay efa nieritreretana azy izy ireny.
Hanatsara ny fivezivezena ao an-tanàna ny fahatongavan'ilay lalamby tokana (monorail), izay ‘minibus’ no miantoka izany aloha amin'izao fotoana izao. “Vitsy loatra izy ireny ary tena voafetra be ny toerana alehany”, hoy ilay mpahay maritrano Robson Sena.
Ny Fitsarana misahana ny fitantanambolam-panjakana dia manipika fa maherin'ny 270 tapitrisa euros no efa natelin'ilay tetikasa, izany hoe efa maherin'ny antsasak'ilay 500 tapitrisa natokana hatrany am-piandohana. Amin'ireo tetikasa valo voakasik'ilay zotra, efatra no natsahatra, hoy ny TCE.
Raha natonin'ny Agência Mural, nanamafy ilay orinasa fa eritreriny ny “hanohy ireo sehatrasa rehetra natsahatra”. “Hitatitra isanandro olona maherin'ny 170.000 ny zotra faha-17″, hoy ny fanamarihana. Tsy nolazaina ny fepotoana hanorenana ilay ‘monorail’ ao amin'ny faritra Paraisópolis.
Raha ny momba an'i Brasilândia indray, tokony tao anatin'ny rafitra PPP (Partenariat public-privé [fr]) iarahan'ny fanjakana sy ny tsy miankina, no nanatontosana ny asa, saingy notsoahana ireo orinasa nanana fifamatorana arak'asa, taorian'ireo olana nosedraina tamin'ny resaka fahazoana famatsiambola nanaraka ilay tantara ratsin'ny Opération Lava jato [fr] (fanadihadiana momba ny tsolotra sy kolikoly ifanaovan'ireo mpanao politika ao Brezila amin'ireo orinasa mpisahana asa fanorenana sy ireo mpandraharaha).
Andrasan'ny governemantan'ny fanjakan'i São Paulo ny hisian'ireo orinasa hafa ho liana amin'ilay tetikasa izay, hatreto, tsy mbola misy misoratra ao anaty taratasy.
Ireo asa miantona ao an-drenivohitra (Magno Borges/Agência Mural)
Ireo asa miandry ao an-drenivohitra. TCE : fitambaran'ireo fifanarahana nifanaovana 10 lavitrisa euros, fitambaran'ny vola niasa 1,9 lavitrisa euros. Asa miantona 53, asa nihoatra ny fetrandro 29. TCM : fitambaran'ireo fifanarahana nifanaovana 3,6 lavitrisa euros. Asa tsy vita 289, mihantona 106, tsy natomboka 98, am-periny 85 izay 17 monja no nanaja ny fepotoana.. Loharano TCM Aprily 2019.